एमाले–माओवादी एकता : मासिने पालो अब कसको ?
Mon, Jan 17, 2022 | 23:00:32 NST
Posted: Tuesday, Apr 17, 2018 19:00 PM (4years ago )
-विदेशी स्वार्थ र सञ्चालनमा हामी आफै नेपाल सिध्याउँदैछौँ ।
राणाविरूद्ध राजा र दलहरू मिलाइयो विदेशीद्वारा । अर्को चरणमा राजा विरूद्ध, कहिल्यै नमिल्ने, कांग्रेस र कम्युनिष्टको मिलाप गराइयो २०४६ मा । तीनै कांग्रेस र कम्युनिष्ट विरूद्ध अर्को कम्युनिष्ट उठाएर हिंसा गराइयो २०५२ देखि १० वर्षसम्म ।
अनि फेरि राजाको पालो आयो । हिंसा गरिराखेको, नेपाल, भारत र अमेरिकाले समेत आतंककारी भनेको, माओवादी र कांग्रेससहित संसदीय दलहरूलाई एक ठाउँ गाभेर राजा विरूद्ध ‘आन्दोलन’ गर्न १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गराइयो २०६२ मा ।
भारत सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको त्यो सम्झौताले राजालाई एक्ल्याएर अन्ततस् नेपालबाट राजसंस्था नै समाप्त पार्यो । यस क्रममा एकपछि अर्को गर्दै हाम्रा सबै राष्ट्रिय संस्थाहरू कमजोर पारिए, समाप्त पारिए, हामीलाई नै हतियार बनाएर ।
लोकतन्त्रका नारा उरालेर राष्ट्रिय एकताको प्रतिक राजसंस्था समाप्त पारियो, सबै भन्दा पहिला । त्यसपछि प्रहरी, प्रशासन, व्यवस्थापिका, सेना, न्यायपालिका, राजनीतिक दलहरू, नेताहरू, संस्कृति, धर्म, परम्परा, सबैलाई कमजोर पारियो वा मासियो नै, केही गर्नै नसक्ने गरी, फेरि उठ्नै नसक्ने गरी ।
भारतले नमिलाइदिएसम्म एक अर्काका शत्रु रहेका एमाले र माओवादी मिलाप भएर तालमेल गरेर चुनावमा जाँदा कांग्रेस सकियो । यी दुई कम्युनिष्ट जोडिएर एउटै पार्टी बनाउने क्रम चल्दैछ यस बेला ।
तर एउटा शक्ति अर्का विरूद्ध प्रयोग भएर क्रमै सँग एक–अर्कालाई मास्ने विदेशी दाउ रोकिएको छैन नेपाली राजनीतिमा ।
प्रश्न बाँकी छ, मासिने पालो अब कसको ?
–राजनीति शास्त्री दीपक गजुरेलको यो विश्लेषण नेपाल पोलिटी डट कमबाट लिइएको हो ।